Telefoonka Cusub ee Iphone 11 Oo La Kulmay Caqabad Dhinaca Suuqa Ah Iyo Waxyaabaha Ay Dadku Ku Diideen - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaTelefoonka Cusub ee Iphone 11 Oo La Kulmay Caqabad Dhinaca Suuqa Ah Iyo Waxyaabaha Ay Dadku Ku Diideen
Telefoonka Cusub ee Iphone 11 Oo La Kulmay Caqabad Dhinaca Suuqa Ah Iyo Waxyaabaha Ay Dadku Ku Diideen
New York (JigjigaOnline) – Waxaan ka hadleynaa nakhshadda teleefanka cusub ee iphone 11 oo ay shirkadda Apple Talaadadi shaacisay, kaasi oo ay dad badan aad aad u hadal hayaan cabsida Trypophobia loo yaqaanno oo ay kala kulmaan seddexda kaameera uu taleefanku leeyahay.
Trypophobia waa Cabsiyada daloolada, wuxuuna qofku ka baqaa in meel kasta oo daloosha wax ku jiraan ama ka soo galayaan.
Apple ayaa caan ku ah soo saarista telefoonnada casriga ah, iyadoo mid walbana waxyaabaha cusub lagu soo kordhiyo. Noocan cusub ee iPhone 11 ayaa ah nooc casri ah balse dadka qaar lama aysan dhicin sadexda kaamera ee gadaal kaga yaal.
Cilmi baarayaasha kala ah Professor Arnold Wilkins iyo Dr Geoff Cole oo wax ka dhiga jaamacadda Essex, ayaa aaminsan in dadka qaar cabsi ay dareemayaan markay telefoonka arkaan sababtoo ah waxaa calaamadahaasi leh cayayaanka sida caarada, dabaqallooca ama hangarlaha iyo maska.
Waa bandhigii ugu weynaa oo ay qabato shirkadda Apple maadaamaa labada nooc ee telefoonnada kala ah iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max ay yihiin kuwa hal waqti lagu duubi karo dhowr muuqal.
Noocan cusub ee telefoonka waxaa kaloo la sheegayaa inuu leeyahay kaamerad balaaran oo xittaa qofka u ogolaaneysa inuu muuqaal ka duubo goob mugdi ah.
Dadka qaar ayaa cabsidooda u sababeeyay sababta aysan u iibsaneyn noocan cusub ee iPhone-ka, iyagoo siyaabo kala duwan ugu hadlay baraha bulshada.
“telefoonka waa wada kaamera,” ayay tiri gabar boggeeda twiitarka aragtideeda ku soo qortay marki ay aragtay sawirrada taleefanka.
“Shirkadda kama aysan fakarin dadka qaba xanuunka cabsiyada daloolada markii ay kaamera badan u yeeleen telefoonka” ayuu yiri mid kamid ah dadka qaba xanuunkan.
Maraykanka oo Iiran ku eedeeyey weerarkii Warshadaha Sucuudiga
AKHRISO: Warbixin Sawir Buuxa Ka Bixinaysa Xasuuqii Ayshaca Ee 1960 Iyo Qaabkii Ciidamada Itoobiya Dadka U Laayeen